न्यूज सञ्जाल: » भाइटीका लगाउँदा कता फर्किने ? कुन रंग प्रयोग गर्ने ?
भाइटीका लगाउँदा कता फर्किने ? कुन रंग प्रयोग गर्ने ?
न्यूज सञ्जाल १२ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०९:३९
काठमाडौं । तिहारको मुख्य दिन आज दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकअर्कालाई टीका लगाइदिएर मनाइँदै छ । यस दिन दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकअर्कालाई टीका लगाइदिएर येश, ऐश्वर्य, दीर्घायु र समृद्धिको कामना गर्दछन् ।
भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ । राज्य सञ्चालकले साइतमै टीका लगाउनु पर्ने र सर्वसाधारणले भने दिनभरी नै टीका लगाउन सक्ने समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतम बताउँछन् ।
भाइटीकामा रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो र नीलो गरी पाँचवटा रंगको टीका लगाउने भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको समितिका अध्यक्ष गौतमले बताए । अनलाइन खबरबाट